Bible—Akwụkwọ Sitere n’Aka Chineke - Naanị Ebe A Ka Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n'Ịntanet
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Ateso Australian Sign Language Aymara Bambara Baoule Basque Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Costa Rican Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Jula Kabyle Kalenjin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Konkani (Roman) Korean Korean Sign Language Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mexican Sign Language Mingrelian Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Rarotongan Romanian Rotuman Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Wolof Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
ISI NKE ABỤỌ
6 O were ihe karịrị afọ 1,600 iji dee Bible. Ndị dere ya biri ndụ n’oge dịgasị iche iche, nọrọkwa n’ọnọdụ dị iche iche. Ụfọdụ n’ime ha bụ ndị ọrụ ugbo, ndị ọkụ azụ, na ndị ọzụzụ atụrụ. Ndị ọzọ bụ ndị amụma, ndị ikpe, na ndị eze. Luk, bụ́ onye so dee Oziọma ahụ, bụ dọkịta. N’agbanyeghị ọnọdụ dịgasị iche iche nke ndị dere ya, Bible nwere nkwekọ site ná mmalite ruo ná ngwụsị ya.*
9 Bible ziri ezi n’ihe banyere akụkọ ihe mere eme, a pụkwara ịtụkwasị ya obi. Ọ kapịrị okwu ọnụ n’akụkọ ya. Ọ na-agụnye ọ bụghị nanị aha ndị mmadụ kamakwa usoro ọmụmụ ha.# N’ụzọ dị iche n’ebe ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme nke ụwa nọ, bụ́ ndị na-adịghị ekwukebe mmeri e meriri ndị nke ha, ndị so dee Bible kwuru eziokwu, ọbụna dekọọ mmejọ nke ha onwe ha na mba ha. Dị ka ihe atụ, n’akwụkwọ Bible bụ́ Ọnụ Ọgụgụ, onye dere ya, bụ́ Mozis, kwetara na ya mejọrọ nnọọ ihe, bụ́ nke mere ka a dọọ ya aka ná ntị n’ụzọ siri ike. (Ọnụ Ọgụgụ 20:2-12) A dịghị ahụcha eziokwu otú ahụ n’ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme ndị ọzọ, ma a na-ahụ ya n’ime Bible n’ihi na ọ bụ akwụkwọ sitere n’aka Chineke.
13 Bible nwere ọtụtụ amụma, bụ́ ndị ọtụtụ n’ime ha mezuworo. Tụlee otu ihe atụ. Site n’ọnụ Aịzaịa onye amụma, bụ́ onye dịrị ndụ na narị afọ nke asatọ T.O.A., Jehova buru amụma na a ga-ebibi obodo Babilọn. (Aịsaịa 13:19; 14:22, 23) E kwuru ihe dị iche iche ga-ewere ọnọdụ iji gosi kpọmkwem otú nke a ga-esi mee. Usuu ndị agha nke ga-awakpo Babilọn ga-eme ka mmiri dị n’osimiri ya takọọ ma jiri ụkwụ banye n’obodo ahụ n’alụghị agha ọ bụla. Ọ bụghị nanị nke ahụ. Amụma Aịzaịa ọbụna kpọrọ aha eze ga-emeri Babilọn—Saịrọs.—Aịsaịa 44:27-45:2.
16 E buru amụma banyere Babilọn, sị: “Ọ gaghị abụ ebe obibi ọzọ ruo mgbe ebighị ebi; a gaghị ebikwa n’ime ya ruo ọgbọ nile: onye Arebia agaghị amakwa ụlọikwuu ya n’ebe ahụ; ndị ọzụzụ atụrụ agaghị emekwa ka atụrụ ha makpuo n’ebe ahụ.” (Aịsaịa 13:20) Amụma a ekwughị nanị banyere ọdịda nke obodo. Ọ na-egosi na Babilọn ga-atọgbọrọ n’efu ruo mgbe ebighị ebi. Ị pụrụ ịhụ ihe àmà na-egosi na okwu ndị a mezuru. Ebe Babilọn oge ochie dịbu, bụ́ nke mmadụ na-ebighịzi na ya—nke dị ihe dị ka kilomita 80 n’ebe ndịda Baghdad, Iraq—bụ ihe akaebe na-egosi na ihe Jehova kwuru site n’ọnụ Aịzaịa emezuwo: “M ga-ewerekwa azịza, bụ́ mkpochapụ, zachapụ ya.”—Aịsaịa 14:22, 23.%
17 Ịmata na Bible bụ akwụkwọ nwere amụma a pụrụ ịtụkwasị obi na-ewusi okwukwe ike, ọ́ bụghị ya? N’ezie, ebe ọ bụ na Jehova Chineke mezuru nkwa ndị o kwere n’oge ndị gara aga, anyị nwere ihe mere anyị ga-eji nwee obi ike na ọ ga-emezukwa nkwa o kwere maka ụwa paradaịs. (Ọnụ Ọgụgụ 23:19) N’ezie, anyị nwere “olileanya ndụ ebighị ebi nke Chineke, onye na-apụghị ịgha ụgha, kwere ná nkwa tupu mgbe dị anya gara aga.”—Taịtọs 1:2.^
* Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-ekwu na akụkụ ụfọdụ nke Bible na-emegide akụkụ ya ndị ọzọ, nzọrọ ndị dị otú ahụ enweghị ihe ndabere. Lee peeji nke 14-17 nke broshuọ bụ́ Akwụkwọ Dịịrị Mmadụ Nile, bụ́ nke Ndịàmà Jehova bipụtara.
# Dị ka ihe atụ, lee usoro ọmụmụ Jizọs nke e depụtara n’ụzọ zuru ezu na Luk 3:23-38.
% Iji nwetakwuo ihe ọmụma banyere amụma Bible, lee peeji nke 27-29 nke broshuọ bụ́ Akwụkwọ Dịịrị Mmadụ Nile, bụ́ nke Ndịàmà Jehova bipụtara.
^ Mbibi nke Babilọn bụ nanị otu ihe atụ nke amụma Bible mezuru emezu. Ihe atụ ndị ọzọ na-agụnye mbibi nke Taịa na Ninive. (Ezikiel 26:1-5; Zefanaịa 2:13-15) Ọzọkwa, amụma Daniel kwuru na ọtụtụ alaeze ukwu ga-esochi ibe ha mgbe e bibisịrị Babilọn. Ha na-agụnye Midia na Peshia nakwa Gris. (Daniel 8:5-7, 20-22) Lee Ihe Odide Ntụkwasị maka ntụle nke ọtụtụ amụma ndị metụtara Mezaịa bụ́ ndị mezuru n’ebe Jizọs Kraịst nọ.